Izindaba - Yini I-Metal Foam? Ukuhlukaniswa kwensimbi yensimbi nezicelo
I-Metal Foam ibhekisa ezintweni ezikhethekile zensimbi ezine-foam pores.Ngezici zayo ezihlukile zokwakheka, i-foam yensimbi inochungechunge lwezinzuzo ezinhle, njengokuqina okuphansi, ukusebenza kahle kokufakwa kokushisa, ukusebenza okuhle kokufakwa komsindo namandla okuthola amaza kagesi.
Inokungena okuphezulu komoya, cishe onke ama-pores axhunyiwe, i-BET yama-pores inkulu futhi incane ngobuningi.
Ukuhlukaniswa kwe-foam yensimbi
I-Metal Foam ikakhulukazi njenge-aluminium foam, i-foam foam, i-nickel foam namanye ama-alloys foam.
I-Aluminium foam enama-alloys ayisisindo esincane futhi inezici zokumunca umsindo, ukufudumeza ukushisa, ukuncipha kokudlidliza, ukumunca amandla ne-wave kagesi, njll. Ifanelekile ungqimba lokuvikela umcibisholo, izindiza kanye nezingxenye zalo zokutakula, ibha yezimoto, idivaysi yokwehliswa kokudlidliza kwe-electromechanical, ikhava ye-electromagnetic wave shielding ye-pulse power supply, njll.
Ngenxa yesakhiwo se-pore esixhunyiwe ne-porosity ephezulu, i-nickel foam ine-high performance yegesi, indawo ephezulu ephezulu namandla we-capillary. Isetshenziswa kakhulu njengezinto ezisebenzisekayo ukwenza izihlungi eziwuketshezi, ama-atomizer, iziguqula eziguqula izinto, amapuleti ebhethri kanye nabashintshi bokushisa.
Igwebu lethusi line-conductivity enhle kanye ne-ductility, izindleko zokulungiselela eziphansi kune-nickel foam, kanye ne-conductivity engcono, ngakho-ke ingasetshenziswa ekulungiseleleni izinto ze-battery anode (carrier), i-catalyst carriers nezinto zokuvikela ugesi.
Ikakhulu, i-foam yethusi isetshenziswa njengezinto eziyisisekelo ze-electrode yebhethri, enezinzuzo ezisobala. Kodwa-ke, ukumelana nokugqwala kwethusi akukuhle njenge-nickel, evimbela ukusebenza kwayo.
Izinsimbi ze-foam zensimbi
Amagwebu ensimbi anamandla athile, i-ductility kanye nokwengezwa, futhi angasetshenziswa njengezinto zokwakha ezingasindi.Le nto kudala isetshenziswa njengezinto ezisemqoka zeziqeshana zezindiza.Kuimboni ye-aerospace neyemicibisholo, amagwebu ensimbi asetshenziswa njengolula, ukudlulisa ukushisa Ngenxa yokuthi ingashiselwa, ifakwe noma ifakwe ku-elekthronikhi esakhiweni, ingenziwa isangweji elinamalungu. (ngenxa yokuhamba kahle kwayo okushisayo) kanye negiya lokufika lomkhumbi-mkhathi, njll.
Ekwakhiweni, igwebu lensimbi liyadingeka ukwenza izinto ezikhanyayo, ezinzima, nezimelana nomlilo, ukubopha, noma ukusekela lezi zinto. Ukusheshisa nokuncipha kwamakheshi esimanje ngemvamisa ephezulu nejubane eliphezulu futhi kudinga ukwakheka okungasindi kwensimbi enepulangwe zombili ukumuncwa kwamandla nezimpawu zokuthwala ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla.Amagobolondo e-cylindrical asetshenziswa kakhulu ezinhlakeni zobunjiniyela, njengama-fuselages ezindiza namafutha asogwini lwasolwandle i-RIGS. igwebu eliqhubekayo: amakhoyili, isakhiwo sinamandla amakhulu kunegobolondo eliphakathi nendawo elingaqinisekisiwe lobubanzi nosayizi ofanayo.
I-foam yethusi kulula ukuyikhiqiza futhi kulula ukuyikhubaza, ngakho-ke ilungele iziqobosho.
Amagwebu ensimbi angasetshenziswa njengokuqinisa izinto eziningi eziphilayo, ezingajwayelekile nezenziwe ngensimbi.Isibonelo, okokusebenza kwe-nickel foam reinforced aluminium alloy (NFRA) material kwenziwa ngemuva kokuqiniswa ngokugcwalisa i-aluminium encibilikisiwe ku-nickel foam.
I-foam yensimbi ilungele kakhulu ukuthi isetshenziswe njenge-rollweight impahla ethwala amapaneli ahlukahlukene, amagobolondo namashubhu ukwenza izinhlanganisela ezinama-laminated. esikhunjeni samanje sokusebenzisa ingilazi noma isikhumba esiyinhlanganisela yesikhumba.Lolu ungqimba lwesikhumba luhlukaniswe nezinto zekhekhe lezinyosi zensimbi nge-aluminium yensimbi noma ngephepha, noma ngogwebu oluqinile lwepolymer ukunika iphaneli lesangweji ukuqina okukhulu okugoqayo namandla athile okugoba. ubuchwepheshe bunwetshiwe kwezinye izinhlelo lapho isisindo siyinkomba esemqoka: imikhumbi-mkhathi, izihlibhi, izikebhe zomjaho nezakhiwo ezihambayo.
Ukuvikela ibhafa nakho kungenye yezinto ezisetshenziswa kakhulu ngamagwebu ensimbi, okumele abe namandla okuthola amandla ngenkathi elawula amandla amakhulu asebenza entweni ezovikelwa ngaphansi komkhawulo wokudala umonakalo.
Amagwebu adonsayo afaneleke kahle kuzinhlelo zokusebenza ezinjalo.Ngokulawula ubukhulu bayo obuhlobene, amandla amagwebu ensimbi angalungiswa ebangeni elibanzi.